Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Ogadenya Ee Victoria Wadanka Australia oo Bayaan Soo Saartay.
Jaaliyada Ogadenya Ee Victoria Wadanka Australia oo Bayaan Soo Saartay.
Jaaliyada Ogaadeeniya ee Victoria wadanka Australia ayaa bayaan ka soosaartay dhacdadii xanuunka badnayd ee taabatay dhamaan quluubta umada Soomaaliyeed.
Jaaliayada Ogadenya ee Victoria Waxay cambaaraynaysaa falkan lama garaystaanka ah ee Dawlada Fadaraalka Soomaaliya ku kacday waana ficil aan la aqbali kari oo waxshinimo ah waana khiyaamo qaran in muwaadan Soomaaliyeed oo wadankiisii jooga loo gacan galiyo Cadawga soojireenka ah ee Ethiopia kaasoo oo uu mudo badan ka difaacayay ciida somaliyeed.
Jaaliyadu waxay sigaara dhaliil dusha uga tuurtay Madaxa Dawlada Faderalka Somaliya oo ay ugu horeeyaan Madaxwanaha iyo Ra’isal wasaaraha oo ayagu masuul ka ahaa ugacan galinta Naftii hure Cabdikariim Sheekh Muuse Ethiopia
Jaaliyadu waxay baaq udiraysaa beesha Caalamka, hay,adaha xuquuqul insaanka iyo cidkas oo ay khusayso in Cabdikariim loo gacan galiyay cadaw aan cayminaynin meel kadhacna ay ku tahay shafarta iyo karaama shaqsiga aadamaha ah.
Jaaliyadu waxay Baaq u diraysaa dhamaan umada Soomaaliyeed inay bad baadiyaan qaranimadooda ilaashadaana dalmooda kana difaacaan cadaw midka midabkooda leh iyo midka kalaba
Waa in shacabka soomaaliyeed meel cad ka istaagaan falkan xun ee soomaali diidka ah ee dabadhilifnimada ku dhisan.
Waxay Jaaliyadu baaq udiraysaa shacabka geesiga ah ee Ogaadeeniya inay cadawgoodii soojireenka ahaa uusan ka gadmanin loona joojinin dabadhilif iyo dhuuni qaate.
Halganka aad ku waydeen boqolaal geesiyaal ahaa yuusan noqon mid xamaasad iyo ismoodsiis idiin dhaafa, waa in cadawga aad ka saartaan ciidiina iyo walaalihiina Soomaaliyeed ee dharcadu maamusho.
Ugu danbayntii Jaaliyada Ogaadeeniya ee Victoria waxay sharciga caalamiga ah la tiigsan doontaa cidkasta oo ku luglahayd xad gudubka loogaystay Halgame Cabdikariim Sh Muuse.
Midnimo Mintid Iskutashi.
Jaaliyada Ogadenya Ee Victoria Wadanka Australia.